GitHub na-echekwa ihe ncheta: Achịkọta na-eduzi weebụ na-ejiri ọtụtụ edemede
GitHub bụ otu n'ime ọrụ nchịkọta data kachasị ama ama.Ngwá ọrụ a nwere ike ibelata ọtụtụ ibe weebụ n'ime usoro a pụrụ ịdabere na ya. A maara ya nke ọma maka igwemịzụ ya na-achọpụta nkà na ụzụ ma dabara adaba maka obere ụlọ ahịa na-ajụ. A na-atụle atụmatụ kachasị iche iche nke GitHub n'okpuru:
Na GitHub, ị nwere ike wepụ ọtụtụ ibe weebụ dịka ịchọrọ ma gbanwee data n'ime usoro dị ka CSV na JSON. Ị nwekwara ike nyochaa njirimara data mgbe a na-ekpocha ya; GitHub na-agafe njikọ ndị na-abaghị uru ma nweta gị data nke ọma.
N'adịghị ka ọrụ ndị ọzọ nyocha , GitHub na-enyocha data gị ma dozie obere njehie na njehie niile - retrato fotografico planos y. Ọ na-enye anyị ozi ziri ezi na nke na-ezighi ezi ma nyochaa njirimara nke data n'onwe ya. I nwekwara ike iwepu faịlụ PDF na akwụkwọ HTML na ngwá ọrụ a.
GitHub kacha mara amara maka interface enyi ya na ọrụ ọ bụla a pụrụ ịdabere na ya. Ọ dịghị achọ ọrụ ọ bụla ma nwee ike iji ọnwa mgbe ọnwa gasịchara. Ị nwere ike ịhọrọ site n'ụdị dịgasị iche ma kwe ka GitHub scrape na mbupụ data na usoro a chọrọ. Ọ bara uru maka mmalite, ụmụ akwụkwọ, ndị nkụzi, na freelancers.
Nyocha ozi site na weebụsaịtị
Na GitHub, ị nwere ike iwepu ozi sitere na weebụsaịtị ndị dị mfe. Ngwaọrụ a na-ewepụkwa data sitere na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi, njem njem na ebe e-commerce na-enweghị ihe ọ bụla. Ọzọkwa, ọ na-agbanwe koodu koodu HTML ma na-edozi obere njehie niile na-akpaghị aka.
Ikike ịchịkwa ma ọ bụ mepụta edemede na mmadụ
Otu n'ime ihe ndị kachasị iche na GitHub bụ na ọ nwere ike ijikwa ma mepụta mmadụ abụọ na edemede. Ngwaọrụ a na-eme ka mmezi omume dị mfe ma nwee ike iwepu ihe ruru iri puku ibe weebụ n'ime ihe nkeji. Na GitHub, mbugharị nke ndị nnọchiteanya na ndebanye aha data n'etiti usoro dị iche iche na-eme n'enweghị nsogbu.
Gbanwee data a na-emebeghị ka ọ bụrụ ihe a na-emepụta na nke a na-eji eme ihe
.nyocha na ọgwụgwọ, GitHub gbanwere data ndị a na-adịghị arụ ọrụ iji hazie data, nke a na-eji eme ihe na nke e mepụtara na sekọnd ole na ole. Ngwaọrụ a bụ ihe kwesịrị ekwesị maka mmemme na ndị na-abụghị programmers. Ọ bụghị naanị na-esepu ibe weebụ gị kama ọ na-agụkwa saịtị gị ma na-enyere gị aka ịmepụta ndị ọzọ na ịntanetị. Enwere ike ịpụ data ahụ na XLS, XML, CSV na JSON formats, na-eme ka ọrụ nke ndị ọchụnta ego na ụlọ ọrụ ruo n'ókè.
Ndị ọrụ nwere ọgụgụ isi
GitHub nwere ike ịmepụta mmadụ n'ime nkeji ma ọ dịghị mkpa ịme ihe ọ bụla ma ọ bụ nkà nhazi. Dabere na igwe na-amụ nkà na ụzụ, ngwá ọrụ a na-akpachi anya na ibe edokwubara ya ma wepụ ọtụtụ URL n'otu oge ahụ. Ozokwa, ọ bụ ike ịpịcha saịtị ahụ na ihe nke sekọnd ma bara uru karịsịa maka akwụkwọ akụkọ dị ka CNN, BBC, The New York Times na The Washington Post.
Ikekwe ọ bụ oge iji nyochaa usoro nchapu data gị ma jiri GitHub bulie azụmahịa gị.